विवाहले खुसी बढाउँछ तर…. « Kakharaa
२४ असोज, एजेन्सी । के तपाईं आफ्नो जीवनमा कसैलाई समावेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यदि प्रश्न ‘हो’ मा आउँछ भने तल दिइएका प्रश्नले तपाईंको दिमागमा घर जमाएको हुनसक्छ ।
तर लाखौं मानिसबीच आफू कस्तो देखिने हुँ भन्ने पिरले तपाईंलाई सताएको हुनसक्छ । तर, चिन्ता नलिनुहोस् । तपाईं जब कुनै नयाँ तस्बिर हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईंको अघिल्लो तस्बिरभन्दा राम्रो देखिन्छ । अर्थात्, सुन्दरताको विषयमा हाम्रो धारणा परिवर्तन भइरहन्छ ।
डेटिङ एपमा परिवर्तन भइरहने तस्बिरले हाम्रो सुन्दरताको मानकलाई निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । यदि तपाईंलाई सुन्दर मानिसहरुको प्रोफाइल हेरेर हिनताबोध भइरहेको छ भने त्यसलाई मनबाट निकाल्नुहोस् । किनभने यो अस्थायी हो, स्थायी होइन ।
धेरैपटक मानिसहरु एक झट्कामा नै कुनै तस्बिरमा फिदा हुन्छन् । त्यसकारण यस्तो मौका तपाईंका लागि पनि आउन सक्छ । हामी जुन अनुहार कम देख्छौं त्यो नै हामीलाई सबैभन्दा आकर्षक लाग्छ ।
मनोवैज्ञानिकका अनुसार हामी जुन अनुहारलाई सररर्ती हेरेर अघि बढ्छौं थुप्रै पटक त्यसलाई पुनः हेर्न मन लाग्छ । यसको पछाडि एउटा मनोविज्ञान छ र त्यो हो कतै हामीले आफ्नो सम्भावित साथीलाई छुटायौं कि ?
विवाहले खुसी बढाउँछ तर…
विवाहपछि केही दिनसम्म मानिसहरु सन्तुष्ट र खुसी देखिन्छन् । तर यो भाव स्थायी हुँदैन । विवाहको केही वर्षपछि उनीहरु पुनः त्यहि स्थितीमा पुग्छन् जहाँ विवाहअघि थिए । त्यसकारण विवाहले स्थायी खुसी दिँदैन ।
तर पुरुषले भने ब्रेकअपलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्दैनन् । उनीहरु सम्बन्धविच्छेद पछि सनकी हुन्छन् । सम्बन्धविच्छेदपछि महिला होस् वा पुरुष दुबै कम विश्वासिला हुन्छन् ।